Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Seychelles Madagascar Malgache » Seychelles dia mampitolagaga ireo manam-pahaizana momba ny dia lavitra avy any Espaina
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • Seychelles Madagascar Malgache • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Ny Sandals Tourism dia mitondra ny masoivohon'i Espaina amin'ny fitsidihana
Nanamafy ny ezaka ara-barotra nataony teo amin'ny tsenan'ny Espaniola taorian'ny volana maro nianteherana tamin'ny fifandraisana virtoaly tamin'ireo mpiara-miombon'antoka aminy, ny Tourism Seychelles dia vao haingana no nampiantrano ny fitsangatsanganana fanabeazana voalohany ho an'ny vondrona espaniola vitsivitsy manampahaizana manokana amin'ny fitsangatsanganana lafo vidy.
Nentina nitety an'i Victoria renivohitra ireo masoivoho, niaraka tamin'ny solontenan'ny Tourism Seychelles ho an'i Espaina & Portugal, nitsidika ireo toerana ara-kolontsaina sy vakoka.
Ny traikefa manontolo dia tsy vitan'ny hoe nanatsara ny fahalalany mba hivarotana tsara kokoa ny toerana haleha fa nisy fiantraikany tamin'izy ireo manokana ihany koa.
Ho tombony izany rehefa mampiroborobo ny toerana halehany amin'ny mpanjifany izy ireo.
Nokarakaraina tamin'ny fiaraha-miasa amin'ny Qatar Airways, Constance Hotels and Resorts Seychelles ary miaraka amin'ny fanohanan'ny mpiara-miombon'antoka ara-barotra any Seychelles, ny fitsidihana 5 andro, izay natao tamin'ny fiandohan'ny volana Oktobra, dia mikendry ny hampitombo ny fahitana ny toerana haleha.
Ireo masoivoho valo niaraka tamin'i Mónica González Llinás, ny Seychelles fizahan-tany solontena ho an'i Espaina & Portiogaly, dia nentina nitety an'i Victoria renivohitra, nikaroka ireo toerana ara-kolontsaina sy vakoka. Nandeha lavitra kokoa izy ireo, nitsidika ny vakoka iraisam-pirenena UNESCO Vallée de Mai ao Praslin ary nitety ireo nosy. Nandritra ny fihaonany tamin'ireo mpiara-miombon'antoka isan-karazany nandritra ny fitsidihana fohy nataon'izy ireo, dia nokarakaraina tamin'ny tsiron'ny fampiantranoana Seychellois malaza ireo masoivoho Espaniola.
“Taorian'ny nampiroboroboana an'i Seychelles saika tamin'ireo mpiara-miombon'antoka taminay Espaniola, dia nahafinaritra ny nahitan'izy ireo mivantana ny toerana halehantsika,” hoy Rtoa González Llinás naneho hevitra, ary nilaza fa ny traikefa dia iray amin'ireo masoivoho, nentanin'ny hakanton'ireo nosy sy ny fandraisana. azony, hahatsiaro sy hanampy azy ireo foana rehefa mivarotra fialan-tsasatra any amin'ny toerana haleha.
Nisaotra ny mpiara-miombon'antoka Qatar Airways, Constance Group Resorts Ephélia sy Lémuria, ary ny orinasa mpitantana toerana Mason Travel, Creole Travel Services ary 7º South izay nanolotra vokatra sy serivisy isan-karazany mba hahombiazana ny hetsika.
“Mankasitraka ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fampiantranoana ireo masoivoho izahay. Ny traikefa iray manontolo dia tsy vitan'ny hoe nanatsara ny fahalalany mba hivarotana tsara kokoa ny toerana haleha fa misy fiantraikany amin'izy ireo manokana ihany koa, izay inoanay fa ho tombony rehefa mampiroborobo ny toerana ho an'ny mpanjifany izy ireo, ”hoy Rtoa González Llinás.
“Nitombo ny fahalianana ho an'ny mandeha any Seychelles nanomboka tamin'ny martsa 2021, rehefa nahazo jiro maitso hivezivezy any amin'ny vondronosy ny mponina espaniola,” hoy i Ramatoa González Llinás nanampy, ary nanamarika fa mpitsidika 2 no nandeha tany Seychelles avy any Espaina hatramin'ity taona ity. Ny tsena loharano dia niteraka fahatongavana 296 tamin'ny taona 4,528.